Ngokwesiko, iningi iminyuziyamu edume kakhulu kuleli zwe - endabeni osomabhizinisi izingalo. Futhi akusiwona nje mayelana amaqoqo imidwebo esiyingqayizivele, kodwa futhi ezikhumbuzo yasekuqaleni yezakhiwo, ezikhangayo zemvelo, ezifana engadini kanye epaki ensembles nokunye. Ngakho ngalesi sikhathi. Museum of Impressionism eMoscow ihlelwe usomabhizinisi Boris Mintz.
Imibono kumbhali jokes ukuthi wadala Museum lokho akuyona. Mayelana nendlela impressionism in umdwebo eladabuka France, kuba yonke lalesi sikole ezindaweni lapho asethuthukile. Ngokuqondene Impressionism Russian, kuba kunalokho, ezinye izithombe ezinye abalobi. Abakwazi kubhekwe njengento ucwaningo ahlukene, ukusetshenziswa amasu kudalwa omunye umsebenzi. Sikhuluma amacala ekhishwe inyumbazane. Phela, akukho mkhuba eqinile njengoba in umdwebo Western.
Futhi okwamanje Kulezi zimo umuntu zinegalelo elikhulu kakhulu yengcebo ezweni impressionism. ucwaningo yobuciko Serov, Kustodiev, Polenov, Dubrovsky, Korovin, ngaphandle ihaba, kukhona obukhulu kuzo ukupenda, okuyinto enomthelela ukukhula ukuthandwa njengoba emnyuziyamu abasha.
Lapho Museum zivela?
Lalivulwe Meyi 26, 2016 ku Moscow. Museum, esemgwaqweni eduze metro station. "Belarusian", iyingxenye zamasiko ukuzijabulisa eziyinkimbinkimbi, okuyinto behlaliswe cinema, indawo multimedia kwezemfundo, cafe nge amanani eliphusile, ekilasini yezingane, esitolo sezincwadi. umbhali wephrojekthi ngibe usaziwayo yokuvuselela yayo ye izakhiwo mlando lwekhanda ejensi yezakhiwo UK ngobukhulu John MakAslan.
Ngaphandle, entsha Russian Impressionism Museum e Moscow Yindaba emine inkundla round ukuma. Iphele ngaphandle metal perforated, it has a umbala emangalisa silvery. Esitezi kugcinelwe embukisweni unomphela, lonke - ngokokuqala. Indawo ephelele, okuyinto yakhelwe amakamelo umhlangano, cishe eziyinkulungwane square metres.
I ivulekile ezimhlophe embukisweni izikhala Museum nokubusa nokuhlanzeka kanye intuthuko. A amabhentshi black kungukuthi nje ukugcizelela mhlophe kwemvelo, kodwa futhi wengeza ezinye nento ingaphakathi ihholo.
Ukukhetha indawo Museum yawa phezu kwezinsizwa ukwakhiwa "kwamaBolshevik" ifektri wangaphambili, lingelikaJehova somabhizinisi Boris mints. Wanquma ukuguqula isakhiwo zezimboni, ukuchitha le njongo izimali zabo siqu. Iminyaka engaphezu kuka nanhlanu kukasomabhizinisi ehilelekile lokuqoqa imidwebo by abaculi zendawo uhlobo of Impressionism. Cishe imidwebo engamakhulu, eqoqwe Mintz iyona core embukisweni unomphela Museum.
On ukufakwa phansi emhlabathini izokwethulwa isikrini emikhulu lapho sembula ukudalwa kancane kancane lo mdwebo. Le nqubo umculi American Jean-Kristof Kue niphihlizwe ku izingcezu ezincane kunazo. Futhi njalo smear ngoba smear, okuhloliwe kwaphinde kwakhiqizwa imisebenzi abaculi isiRashiya, okubonisa izivakashi kwakuyoyiqhubekisela kanjani ukuzalwa ezidumile.
Ezinye izithombe embukisweni unomphela sihlelelwe ngasekupheleni kwalo nyaka ukwethula ku zemibukiso abaningi bezinye izizwe. Le misebenzi amakhosi ovelele futhi wonke amazwe omhlaba yokudweba liphefumulelwe umqambi Russian Dmitriya Kurlyandskogo usethe ngqo kulo mjikelezo isikhala umculo imisebenzi emihlanu. igama Ezazimzungezile - "Bona uhambo Musical ukuba Museum of impressionism Russian."
Lo mbukiso lokuqala yesikhashana uzobe anikelwe ukusebenza uhlobo Impressionism Russian umculi Arnolda Lahovskogo, umfundi Ili Repina. Lokhu kuyoba emikhulu embukisweni zokuhlola lapho izivakashi ungabona uhlobo imidwebo, portrait imidwebo. Kanye landscape kanye namathafa yezakhiwo. Njengoba Lakhovsky wahlala eYurophu, eMelika, eMpumalanga Ephakathi, imidwebo yakhe abaningi zemibukiso kuwo wonke umhlaba. Lo mcimbi uzoba imisebenzi amane ngokuhlangenwe umculi. Khona-ke lo mbukiso nalehleliwe imisebenzi ngu Valery Koshlyakov kanye Natalia Kiseleva.
Impressionism Museum e Moscow. embukisweni unomphela
embukisweni unomphela limelela imisebenzi by abadwebi Russian ka engxenyeni yesibili yekhulu nesishiyagalolunye. Angaphezu kuka ayisikhombisa imidwebo, okubonisa ukuthuthukiswa Impressionism Russian esikhathini sokuphumula ubude besikhathi kwekhulu. Indawo egcina amagugu esizwe izivakashi ungabona imidwebo Pimenov, Grabar, Juon, Konchalovsky, Polenov nabanye. Abanye abaculi kukhona izinhlobo ezahlukene kakhulu akuzona Impressionists. Ngokwesibonelo, isithombe noma Serov umuntu okholelwa entweni ekhona okwangempela ngisho Kustodiyev illusionist. Nokho, kukhona imidwebo yilezi abalobi, senziwa isitayela impressionism. Ngakho, kuyafaneleka ukuthi Museum of Impressionism eMoscow ungeze amaphethini idatha.
Imisebenzi eminingi abaculi Russian kungenziwa ngokuthi impressionistic. Njengoba kushiwo ngesikhathi Umdwebo kwavusa isithakazelo esijulile ezithunyweni art-imvelo, ngenxa yalokho, kwaholela ekutheni kube ucwaningo baphumelele kulolu uhlobo.
Izibuyekezo Museum of ikakhulukazi omuhle. Eziningi zalezi amaphutha kukhona athinta izinqubo zenhlangano, isibonelo, uhambo kukhokhelwe abantu nanhlanu, kanye nababukeli Umhlahlandlela babe lwamanje mayelana amane.
Izivakashi alikhuthalele iqoqo imidwebo noted ezingeni eliphezulu nobuchwepheshe bale iziqondiso zamakhono yabo izinhlobo yokudweba ikakhulukazi art ngokuvamile, kanye nekhono ukutshela amabhayisikobho okuthakazelisayo futhi Abadali zabo.
Impressionism Museum e Moscow, ikheli, Amahora okuvula futhi intengo ithikithi
Uphi Museum? Labo abafisa khona kufanele ithunyelwe ekhelini: Leningradsky Prospect, 12. Yini okufanele uhambe kulabo abafuna vakashela i-Museum of Impressionism eMoscow? Indlela ngcono? Ungathola kukhona usebenzisa esitimeleni. Phuma kudingeka metro station. "Belarusian" noma "Dynamo". Museum ivuliwe ngoLwesithathu kusukela nambili nqo kuze eziyisishiyagalolunye ebusuku, wonke amanye izinsuku - kusukela nanye kwabayisishiyagalombili kusihlwa. Intengo Ticket - ruble ezingamakhulu amabili, ngaphandle ohlelweni izaphulelo izigaba zezakhamizi emphakathini ngaphansi evikelwe. Ngokwesibonelo, abafundi noma impesheni. Kuyinto elula kakhulu ukuba ukubhuka amathikithi kanye nezinsizakalo tour guide atholakala kwi-intanethi ukuthi kuthatha esingaphansi kwehora.
Manje uyazi lapho Impressionism Museum e Moscow, ikheli lapho ungakwazi ukukhumbula kalula. Lokhu ukusungulwa eqoqwe eziningi izithombe ezithakazelisayo. Ikakhulukazi Kuyaphawuleka siwumsebenzi Jean-Christophe Coue. Ukuze ukubhekisisa kahle ngempela isithombe sakhe, yebo, ku-emnyuziyamu.
Sicaphune izinganekwane mayelana isinkwa: izaga kanye namazwi
Yefilakisi Kukushkin: isakhiwo nokukhiqizwa